Vamwe muZanu PF Vanoti VaMugabe Vachatonga Kudzamara Mwari Avatora
Vechidiki vebato reZanu PF vanoti havazi kuzobvumira ani nani zvake mubato iri kuti abvise mukuru webato iri, VaRobert Mugabe, pachigaro sezvo vari ivo chete vachamirira bato iri pasarudzo dzemutungamiriri wenyika. Vechidiki aya vanoti mwari chete ndivo vanogona kuita izvi.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare neChitatu, vatungamiriri vebazi revechidiki muZanu PF, vati vatungamiriri vezvikwata zviri kunzi zvave muZanu PF havasi kuzobvumidzwa kumirira Zanu PF musarudzo dzemutungamiriri wenyika.
Munyori wevechidiki muPolitiburo muZanu PF, VaAbsolom Sikhosana, vati avo vane pfungwa dzekuda kutora chinzvimbo chaVaMugabe vatengesi uye havasi nhengo dzebato iri dzechokwadi.
VaSikhosana vatsigirwa nemutevedzeri wemunyori anoona nezvehutano nevechidiki, Muzvare Tabeth Kanengoni, avo vati danho rekumira naVaMugabe musarudzo rakatorwa nemusangano uyu uye idanho rinotsigirwa nhengo dzese dzebato iri.
Vachitaurawo pamusangano mumwe chetewo pamusoro pekudzingwa kweaimbotungamira bazi revechidiki kuAfrican National Congress yekuSouth Africa, VaJulius Malema, imwe nhengo yeZanu PF, VaTongai Kasukuwere, vati vanotsigira VaMalema zvikuru sei papfungwa dzekupa hupfumi kune veruzhinji vemuSouth Africa.
Vati vatungamira veANC vakaita semutungamiri wenyika iyi, VaJacob Zuma, vakaenda kuhondo yerusununguko kuti vanhu vagare zvakanaka asi vakati zvinoshamisa kuti VaMalema vanodzingirwa kutaura zvairwirwa naVaZuma muhondo.
Zanu PF yatorawo mukana uyu kushora komiti yeparamende iri kutungamira kunyorwa kwebumbiro idzva ichiti komiti iyi iri kushandiswa nemapato eMDC kusatambira zvakabva muvanhu. Vechidiki ava vati vachatora matanho ekuti komiti iyi iite zvido zvevanhu.